THAZINRANANT: 7/19/09 - 7/26/09
ကိုယ့်ခြံကို ကိုယ်ကာကတ်ဖို့ လိုနိမ်ရေ
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလ ကျနော်ရို့ ပါးကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးဖို့ ရောက်လာ ကတ်
တေဗမာ၊ ရခိုင်ပါတီကိုယ်စလှယ်တိအများကြီးထဲမာ ကျနော်အမှတ်အရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်
ယောက်ဟိခရေ။ ကျနော်သူ့ ကိုအမှတ်ရနိမ်စောဝ်ကလည်းသူပြောခရေစကားကြောင့်
ဆိုကေပိုလို့ မှန်ဖို့ ။ကျနော့်စိတ်အထင်ယေ့ပုဂ္ဂိုလ်စောဝ် ရီချမ်းအိုးပါတီကဖြစ်လီဖို့ ထင်
ပါရေ။ကောင်းတော့မသေချာ။ သူပြောခရေစကားကကျနော်ရို့ ရခိုင်လူမျိုးတိမာသူများ
ယေ့စကားကိုကျနော်ယေ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောခါပင်တစ်ခါလဲမမိ။ လူဆိုစောဝ်ကိုယ့်တိုင်း ပြည်
ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်အသက်ပီးလို့ ကာကွယ်ရဖို့တာဝန်လူတိုင်းမာဟိကတ် တေ။ယေ့
ပိုင်ကာကွယ်ခကတ်လို့လဲဒေနိ နိုင်ငံတိစောဝ် ကိုယ့်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံအ
အခြာအာဏာဆုံးရှုံးလားခကေလည်းဖြစ်တေနည်းနင့်ပြန်လို့ ရယူနိုင်ကတ်ရဖို့ ။ဗိုလ်
မျိုးရေးအမြင်ကျဉ်းကားအင်္ဂလိပ်နင့်အတူနိမ်ပလလို့ ပြောလို့ မရ။ အသူတစ်ယောက်
ရခိုင်ပြည်၏တော်လှန်ရေး ခေါင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တေ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးချင်းပျံကို တော်လှန်
ရကောင်းလားပြောကေမတရားနိုင်။လူတိုင်းလူတိုင်းမာသူ့ တိုင်း ပြည်အတွက် သူ့ ပြည်
သူတိအတွက်သူ့ မျိုးဆက်တိအတွက်လုပ်ပီးရဖို့ တာဝန် တိဟိရေ။
ဒေနိရခိုင်လူမျိုးနိုင်ငံရေးသမားအများစု( အားလုံးကိုမဆိုလိုပါ။)ကိုယ့်ခြံကိုကာဖို့အစား
လူမျိုးရေးအမြင်ကျဉ်းရေလို့ အမြင်မခံချင်လို့ ဆိုကတ်တေ။ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်ကိုယ်
လုပ်စောဝ်ကို လူမျိုးရေး အမြင်ကျဉ်းလို့ မလုပ်ကေကိုယ့်ကိုရာသက် ပန်ကျွန်လုပ်ခိုင်း
စောဝ်ကိုလူမျိုးရေးအမြင်ကျယ်ရေလို့ ဆိုဖို့ လား။စဉ်းစားစရာပါ။
ကိုယ့်ခြံကိုသူများဝင်ဖျက်ဆီးနိမ်စောဝ်မြင်ယက်သားနင့်အမြင်ကျဉ်းရေလို့ ထင်ဖို့ စိတ်ပူ
ပြီးကြောက်လို့ကိုယ့်ခြံကိုကိုယ်မကာကွယ်ကေသူ့ ၏အသိညာဉ်ကိုရာခန့် မှန်းကြည့်ရ
လီဖို့ ယာ။ယေ့အတွက်နင့်လူမျိုးရေးအမြင်ကျဉ်းရေလို့ ဆိုဆို ဇာပိုင်ဆိုဆိုကျနော်ရို့ က
နိ ကိုယ့်ခြံကို ကို ယ့်စောဝ်ကို ကာဖို့ လုပ်ကတ်မေ။
၀က်တုတ်ကွေးကြောင့် ကမ္ဘာတွင်သေဆုံးသူ ၇၀၀ ကျော်ပြီ
၀က်တုတ်ကွေး ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာ တ၀န်းလုံးတွင် သေဆုံးသူ အရေအတွက် စုစု
ပေါင်း၇၀၀ ကျော်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာကျန်းမာရေး အဖွဲ့ WHO ကအင်္ဂါနေ့တွင်
ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားသည်။အဆုံးပါ သေဆုံးမူ ပမာဏမှာဝတ်တုတ်ကွေး ရောဂါစတင်
ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် (၄) လတာ ကာလအတွင်း သေဆုံးမူ ပမာဏဖြစ်သည်။WHO ၏ စော
စောပိုင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဇူလှိုင်လ ၆ ရက်နေ့ အထိဝက်တုတ်ကွေးကြောင့် သေ
ဆုံးသူ အရေအတွက်မှာ၄၂၉ ဦးသာ ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ သေဆုံးသူအရေအတွက်
မှာ၇၀၀ ကျော်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ ပြောခွင့်ရ အမျိုးသမီး
Aphaluck Bhatiasevi ကပြောသည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၅ နိုင်ငံတွင် ၀က်တုတ်ကွေး ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေပြီး နှစ်စဉ် ပုံမှန် တုတ်
ကွေးကြောင့် ကမ္ဘာအ၀န်းတွင် သေဆုံးသူ ၂၅၀၀၀၀ မှ ၅၀၀၀၀၀ အထိ ရှိလာနိုင်သည်
ဟု WHO ခန့်မှန်း ပြောဆိုသည်။A(H1N1) ၀က်တုတ်ကွေးကြောင့် သေဆုံးသူ အရေ
အတွက်မှာတောင်နှင့် မြောက် အမေရိကတိုက် နိုင်ငံများတွင် အထူးမြှင့်တက်လာခဲ့ပြီး
အင်ဂျင်တီးနားတွင် လွန်ခဲ့သောတနင်္လာနေ့ထိ သေဆုံးသူ ၁၆၅ ဦးထိ ရှိလာခဲ့ဖြင့်ကမ္ဘာ
တွင်ဒုတိယ အများဆုံး သေဆုံးသည့် နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။အမေရိကန်မှာ ၀က်တုတ်
ကွေးကြောင့် သေဆုံး ၂၁၁ ဦးရှိသဖြင့် ပထမ အသေအပျောက် အများဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်
သည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယနေ့အချိန်ထိ ၀က်တုတ်ကွေး ရောဂါ ခံစားနေရသူ ၄ ဦးရှိပြီး
မြန်မာအိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် ၂၃ ဦး ရှိသွားပြီ ဖြစ်သည်။
နော်ဝေနိုင်ငံအက်စကွိုက်မြို့့ရှိကြက်ခြေနီခမ်းမတွင်ဂျူလိုင်လ၁၁ရက်မှ၁၂ရက်နေ့ 
Posted by သဇင်ရနံ့at 22:312comments:
ဆောင်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ နှင့်အတူတိုင်းရင်း သား အားလုံးပူးပေါင်း
ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြ ခြင်းဖြစ်ပါသည်၊သို့ သော်မြန်မာ ပြည်တွင် လူ့ အခွင့်အရေးမ
ရှိသည့် ကိစ္စနှင့် ရခိုင်ပြည် တွင်နေထိုင်နေကြသောဘင်္ဂါလီရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သ
မားများနှင့် ၄င်းတို့ .ဆွေမျိုး များ ကို (ရိုဟင်ဂျာ) ဟူသောအမည်သစ်တစ်ခုတတ်
ပြီးမြန်မာလူမျိုးစုဝင် စာရင်းထဲတွင်ထည့်သွင်းရန်နှင့် ဘာမှမဆိုင်ပါ။
စံပန်နဂိုမှ နွားပေါင်ကျိုးသည့်ပြဿ နာသည်ညောင်ဦးကမ်းပါးပြိုသည်နှင့် တခြား
စီသာဖြစ်ပါသည်။မြန်မာပြည် တွင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရန်လူ့ အခွင့်အရေးရ
ရှိရန်တိုက်ပွဲဝင်ရမည့်တာဝန်မှာ မြန်မာပြည်တွင်နေထိုင်သူ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူ
တွင်လည်းတာဝန်ရှိပါသည်၊ကျနော်တို့ အတူတိုက်ပွဲဝင်ကြရပါမည်၊သို့ သော်ထိုလူ
တို့ သည် တောကြောင်တွေတော့ မဖြစ်သင့်ကြပါ။
မြန်မာပြည်တွင် ဒီမိုကရေစီစနစ် ဆိတ် သုန်းနေ ချိန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကစစ်အစိုး
ရကိုဖြုတ်ချပြီဒီမိုကရေစီအစိုး ရတခု ပေါ်ထွန်းသည်ကိုမြင်တွေ့ လိုနေချိန်ကိုအခွင့်
ကောင်းယူပြီးကမ္ဘာကို စာနာ စိတ်ဝင် အောင်လိမ်ညာနေခြင်းမှာ မရိုးသားသေ မ
လုပ်အပ်သောမလုပ်သင့်သော လူ့ ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသောလုပ်ရပ်သာဖြစ်ပါသည်။
ရေး တည်ငြိမ်ရေးကို လိုလား သူတိုင်းလက်မခံသင့် မထောက်ခံသင့်သော အားမ
ဘင်္ဂါလီရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားကိစ္စကို ကြုံကြိုက်တုန်းအနည်းငယ်ထပ်ပြောလိုပါ
သည်။ သူတို့ သည်ရခိုင်ပြည် တွင် မျိုးဆက် နှစ်ဆက် ကနေ သုံးဆက်ထိ နေလာ
ပြီးသူများဖြစ်နေကြပါသည်၊မြန်မာပြည်တွင် တရားဝင်အစိုး ရတက်လာသောအခါ
သူတို့ ကိုထိုက်သင့် သာနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေကိုပေးသင့်ပါသည်။ သို့ သော်
သူတို့ အနေဖြင့်မိမိတို့ နေသော တိုင်းပြည်မှပြည်များကစေတနာရှိလာအောင်နေ
တတ်ဖို့ တော့လိုပါသည်။ လူတစ်ယောက်ကိုနိုင်ငံသားပေးသည်ဆိုသည်မှာလွယ်
သည့်ကိစ္စမဟုတ်ပါ၊ နိုင်ငံတကာတွင်ရောက်ရှိနေထိုင်ကြ သော မြန်မာပြည်သား
များနိုင်ငံရေးကိုလေ့လာနေသူများသိ ကြပါလိမ့်မည်။တစ်ချို့ ဆိုလျှင်နိုင်ငံသားအ
အုပ်စုဝင်ဖြစ်ကြောင်းပြလာ သေအခါပြဿနာအကြီးအကျယ်တွေ့နေကြရသည်
ကိုနိုင်ငံရပ်ခြားတွင်နေထိုင်နေကြသော မြန်မာပြည်သားများ သိကြပြီးသားဖြစ်ပါ
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မိမိတို့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကို သူများနိုင်ငံသို့ လွှဲမပေး
ရဆိုသည့် ဥပဒေကလည်းရှိနေပြီးသား ဖြစ်နေ၍ထားရလည်းအခက်။နိုင်ငံတကာ
သားတို့ နှင့်အစိုးရတို့ မှာထိုအကြမ်းဖက်အုပ်စုဝင်တစ်ယောက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာ
အသိုင်းတွင်မိမိတို့ အစိုးရမျက်နှာ ပျက်ရသည့်အဖြစ်ကိုအနောက်နိုင်ငံတော်တော်
များများကိုယနေ့ ရင်ဆိုင်နေရ ပါသည်၊ ထိုအကြမ်းဖက်အုပ်စုဝင်တို့ ကတခါသက်
ဆိုင်ရာမိမိတို့ နေထိုင်သောအစိုးရကိုခြိမ်းခြောက်တာမျိုးပင် ပြန်လုပ်လာသည့်ကို
တွင်း ဗုန်းခွဲမှုတွေလုပ်ပစ်မယ်ဆို တာမျိုးဖြစ်ပါသည်၊
ထို့ ကြောင့်လည်းတစ်ချို့ နိုင်ငံတွေဆိုလျှင် ၅နှစ်ဆိုလျှင်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိပါလျှက်
မပေးသေးတာကိုလည်းတွေ့နေရပါသည်။သူတို့ နေထိုင်ပြုမူပုံများပုံစံမပြောင်းမ
ချင်းနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးရမည့်အနေအထားမတွေ့ ရတော့ပါ။ယနေ့ မြန်မာပြည်
ထားစရာများကိုတွေ့ နေရပါသည်၊ ဥပမာနေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပေးထားသောရခိုင်ပြည်သူ
ယနေ့ကမ္ဘာ့လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးဘုံရန်သူဖြစ်သောအယ်လ် ကိုင်းဒါး၊တာလီဘန်
ကဲ့သို့ သောအကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖွဲ့ များနှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက် ခြင်း စ
သည်ဖြင့် ရခိုင်တမျိုးသား လုံးအတွက်။မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးအတွက်အင် မတန်
အန္တရယ်များသော အလုပ်ကို သူတို့ လုပ်နေကြပါသည်။ထို့ ကြောင့်ထိုလူမျိုး တို့ ကို
နောင်တချိန်အစိုးရသစ်တရပ်။ လွှတ်တော်တရပ်ပေါ်ပေါက်လာလျှင်တောင် နိုင်ငံ
သားအဖြစ်ပေးမည့်ကိစ္စကို ကျနော်တို့ တော်တော်စဉ်းစားကြရပါမည်။ထိုကဲ့ သို့ စဉ်း
စားရသည်မှာ လူ့ အခွင့်ရေးကိုမစဉ်းစား၍နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုမလေးစား
တိုင်း တွင် လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာ ပေါင်းစုံအတူနေထိုင်ကြပါသည်။ကျနော်တို့ မြန်
မာပြည်တွင်လည်းလူမျိုးဘာသာစုံလင်သော ပန်းပေါင်းစုံသည့်ဥယာဉ်ကြီး သဖွယ်
စုငယ်တစ် ခုကဲ့ သို့ ပင်ဖြစ်ပါသည်၊ဥပမာရခိုင်ပြည်မှကမန်လူမျိုးအများစုဆိုလျှင်
မူဆလင်ဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပြီး ရခိုင် ဘုရင် များ လက်ထက် ကတည်း ကပင်
တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့ ကြသူများဖြစ်ပါသည်၊သူတို့ သည်အလွန်အင်မတန်သစ္စာရှိသော
လူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီး ရခိုင်ပြည်ကိုထိလာလျှင်မည်သည့်အခါမျှအသက်ပေးဖို့ ဝန်မ
လင်များမရှိဟုဆိုလျှင်လည်း ရခိုင်လူမျိုးများက ရှိသည်ဟု ရဲ ၀ံ့ပြတ် သားစွာသွေး
တွင်အထင်အရှားရှိနေသည့်ကိစ္စကိုသမိုင်းကဖယ်ထုတ် ၍မသင့်သကဲသို့ သမိုင်း
တွင်မ ရှိသည့်ကိစ္စကို လည်းအတင်းထည့်ှုမရပါ။ဆွမ်းဆန်ထဲကြွက်ချေးရောမိလျှင်
တန်ဖိုးရှိလှသောဆွမ်းဆန်များဆုံးရှုံး သွား နိုင်ပါသည်။တန်ဖိုးရှိလှသည့်ကမန်မူဆ
လင် ဆွမ်းဆန်များဆုံးရမည့်ကိစ္စ များကိုကျနော်တို့ မလုပ်သင့်ပါ။
သူတို့ အသက်သွေးများစွာတို့ သည်ရခိုင်လူမျိုး များနှင့်အ တူဂစ္စပနဒီမြစ်ကြောင်း
တိုင်ပြည်ဖြစ်သည်ကိုလူတိုင်းချက်ချင်းသဘောပေါက်လက်ခံ ကြပါသည်။ အမှန်
လည်းထိုကဲ့သောပင်ဖြစ်ပါသည်၊သို့ သော်ဤမျှလောက်လူ့ အခွင့်အရေးနှင့်ဒီမိုက
မူဆလင် ဘာသာဝင်တို့ နေထိုင် လာ ကြသည်မှာရာစုနှစ်ပေါင်း များစွာကြာနေ
ကြပြီဖြစ်ပါလျှက်နော်ဝေနိုင်ငံဒုတိယမြို့ တော်ဖြစ်သော ဘာဂင် မြို့ တွင် ယနေ့ 
၂၀၀၉ ထိ ဗလီတစ်ခုမျှမရှိသေးပါ၊ မူဆလင်ဘာသာဝင်တို့ ခမျာအိမ်ခန်းသာသာ
အခန်းကျဉ်းလေးတစ်ခုကို သူတို့ ဗလီအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးထိုနေရာတွင်ဝတ်ပြုဆု
တောင်း နေကြ သည်ကို ဘာဂင်ကိုရောက်တုန်းက မိတ်ဆွေမူဆလင်တစ်ယောက်
လိုက်ပြှုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ ခဲ့ရဘူးပါသည်။ကျနော်တို့ မြန်မာပြည် အနောက်ဘက်
ခြမ်းကကျောက်ဖြူမြို့ ဆိုတာဘာဂင်မြို့ ရဲထက်ဝက်လောက်ဘဲရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေ
မယ့် ဗလီ (ကျနော်သိသလောက်ဒီထက်ပိုယင်တောင်ပိုအုံးမည်သုံးခုရှိပါသည်၊စဉ်း
လူနည်းစု မူဆလင်ဘာသာဝင်များ အနှိမ်ခံနေရသည်ဟုအော်နေကြသူများ အ
တွက်ဝေဖန်ဖို့ နှင့်ဆင်ခြင်ဖို့ ဝေငှလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နောက်နော်ဝေးပါတီကြီး
တစ်ခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်က တီဗွီအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောသွားတာကိုလည်းဒီနေရာ
မှာအလျည်းသင့်လို့ ထည့်ပြောလိုပါ သည်။ သူ က နော်ဝေနိုင်ငံဟာလူ့အခွင့်အ
ရေးအပြည့်အ၀ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းလွပ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့် ဒါ
တွေဟာနော်ဝေဥပဒေ အတိုင်းနော်ဝေလူ့ အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ စံအတိုင်းသာဖြစ်ရပါ
မယ်။မူဆလင်ဘာသာဝင်တွေဒီထက်ပို ပြီးလိုချင်ယင်တော့ဆိုဒီအာရေဗျ တို့ 
ပါကစ္စတန်တို့ ကို သွားနေကြပါလို့ ဆိုပါတယ်။ဲနော်ဝေကိုရောက်နေကြတဲ့ တစ်ချို့ 
ကျနော်တို့ ဟာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်အပြောင်းအလဲနှင့်ပတ်သက်လို့ကြိုးစား
လုပ်ဆောင် နေကြတဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာထဲမှလူတွေဖြစ်ကြ ပါတယ်၊အပြောင်းအလဲ
ဖြစ်ပြီးရော။နအဖကိုသူများအပြစ်တင်ပြီးရောမိမိတို့ အာဏာရပြီးရေ ဆိုပြီးထင်ရာ
ဆုံးရမည့်အဖြစ်ကိုကျ နော်တို့ ကြုံတွေ့ ရနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့အချိန်အခါဟာမြန်မာပြည်အတွက်အသက်တမျှအရေးကြီးတဲ့သမိုင်းအလှည့်
အပြောင်းတစ်ခုကိုရောက်နေချိန်ဖြစ်လို့ လူမျိုးရေးသတိ။စစ်ရေး သတိ။ဘာသာရး
သတိ။ နိုင်ငံရေးသတိ တို့ ကိုမလစ်ဟင်း စေပဲအထူးသတိထားလုပ်ဆောင်သင့်လှ
Posted by သဇင်ရနံ့at 18:16 No comments:
Manchester United's owners insist boss Sir Alex Ferguson has "signifi-
cant" funds available and that they do not expect him to fritter them
away. United received £80m from Real Madrid for Cristiano Ronaldo
but Ferguson has only spentafraction of that money. "The manager
hasasignificant amount of money to invest,"said spokesman Tehsin
Neyani."We are talking aboutanet amount of about £60m.That cash
can be reinvested in the squad." United have so far kept transfer dea-
lings toaminimum after selling Ronaldo foraworld record fee.
They have acquired striker Michael Owen for free as well as winger
Antonio Valencia,midfielder Gabriel Obertan and forward Mame Bira-
m Diouf. United had been linked with French striker Karim Benzema,
Brazilian forward Douglas Costa,French playmaker Franck Ribery and
Spain striker David Villa, but Benzema joined Real Madrid for £35m
and United decided not to pursue the other trio.
United also missed out on securing the services of fans' favourite Ca-
rlos Tevez onapermanent basis.
Tevez has joined Emmanuel Adebayor,Gareth Barry and Roque Sant-
a Cruz at Manchester City,with United's near neighbours having spent
about £80m so far this summer.
However,Ferguson has stated he is happy with his squad and will not
pay over the odds for new recruits.
"The manager has not been able to locate players that fit the Manch-
ester United mindset," Neyani added.
"You don't want to pay for unmotivated players not willing to give th-
There had been speculationaportion of the £80m transfer fee for
Ronaldo would go on paying off part of the near £700m debt the
club has acquired.
But Neyani insists the money is available despite the debt United ha-
ve acquired asaresult of the Glazers' takeover in 2005.
We are talking aboutanet amount of about £60m. That cash can be
reinvested in the squad. The point is there is money coming in Tehsin
Neyani - Glazer family spokesman "We do have debt to service and
carryasignificant amount of debt but our interest payments are around
£43.3mayear while our operating profit was £80m topped by an
extra £25m from transfer profits," he said.
As well as having money available, Ferguson has been boosted by the
news that midfielder Park Ji-Sung is set to signanew contract. Park's
existing deal runs out at the end of the 2009-10 season, but chief exe-
cutive David Gill said the 28-year-old was close to agreeing terms.
"In his time with us he's developed his technical and tactical abilities
and done very well. He's becomeavery important player for us and
hadafantastic career with us," Ferguson said.
Meanwhile, veteran midfielder Ryan Giggs insists United can cope
with the departures of Ronaldo and Tevez and defend their Premier
"Since I came into the team the likes of Bryan Robson,Mark Hughes,
Eric Cantona, Ruud van Nistelrooy, Roy Keane and David Beckham
have left the club," said Giggs.
"But that is what the manager is so good at reshaping and re-energ-
ising the team.
"Carlos and Cristiano were great players but we move on.As players
it's like ships in the night. You just get on with it."
Posted by သဇင်ရနံ့at 14:53 No comments:
သူတိုင်းမှတ်မိကြမှာပါ၊ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးလှေဖြင့်စွန့် စားပြီးအလုပ်သွားရှာကြသည့်
ပါတယ်။ တကယ်တော့ဒီနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားကိစ္စတွေဟာ
ကြပါတယ်၊သူတို့ က လုပ်ခဈေးသက်သာတော့နော်ဝေးအလုပ်ရှင် တွေကလည်း
ကြိုက်ကြပါတယ်၊သူတို့ က အများအားဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်
ကိုး။တကယ်တော့နော်ဝေးမှာဘယ်သူ့ကိုမဆို အနိမ့်ဆုံးလစာကိုတန်းတူပေးရ
မယ်လို့ ဥပဒေရှိနေပေမယ့်ခုလို အလုပ်သမားဈေးကွက်မှာဖြစ်ပျက်နေတာက
တော့စိတ်ဝင်စားစရာပါ၊အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေတချို့ ဥပမာဖင်လန်တို့ ဆွီဒင်
တို့ကလည်း အလုပ် လာလုပ်ကြတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။
အာရှနိုင်ငံတွေနှင့်ကွာတာက သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်တွေ
နှင့်အတူလွပ်လပ်စွာသွားလာလို့ ရတာ နှင့်မရတာသာကွာပါတယ်။
အခုလည်းကျနော်အထက်က ပြောခဲ့တဲ့ လူတစ်စုဟာ အဲဒီလိုပဲသူတို့ ကကိုယ့်နိုင်
ငံမှာ(ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျ) မှာ စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေတော့အခြားငွေကြေးတန်ဖိုး
ဒါပေမယ့် ပြဿနာကထိုင်းစစ်တပ် ဒီလူတွေကိုဖမ်းမိပြီး ပင်လယ် ထဲကိုပြန်မျှော
ရာကနေ စတာပါ၊တကယ်တန်းဆိုယင်တော့ထိုင်းစစ်တပ်ကလဲ ဒီလိုလူသားချင်း
မစာနာတဲ့ ကိစ္စကိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။တရားမ၀င်ဝင်ရောက်လာရင်
တရားဥပဒေအရ လိုအပ်တာကိုလိုအပ်သလိုအရေးယူပြီးရင် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ
တွေကိုလဲပြောင်းပေး၊ ဒါဟာ အပ်နှင့်ထွင်းရမယ့်ကိစ္စ ပါ၊ဒါပေမယ့်ဒီလောက်နှင့်
ပြီးမသွားပါဘူး၊ မီဒီယာဂုရုတွေက ဒီရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုသူတို့ ရဲ့ 
ဘ၀ပြောင်းပြီးမြန်မာပြည်မှာ တစ်ခါမှ မရှိ မကြားဘူးတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေဖြစ်
ကုန်ကြပါတယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်စပ်မြို့ တွေဖြစ်တဲ့ဘူးသီး တောင်နှင့်မောင်တော
မြို့ ဆိုတာ ဟိုးအယင်ကတည်းကဘင်္ဂါလီ ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားတွေမြန်မာ
ပြည်ကို အလုပ်လာလုပ်ပြီးမပြန်ပဲနည်းမျိုးစုံနှင့်ခိုကပ်နေထိုင်ကြတဲ့ မြို့ တွေဖြစ်
ယျဉ်ကျေးမှုအားလုံးဘင်္ဂါလီတွေသာဖြစ်တယ်၊အဲဒီနယ်စပ်မြို့ များမှ ဘင်္ဂါလီလူ
မျိုးများနှင့် ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျ မှ ဘင်္ဂါလီတို့ ကအမြဲတမ်းဥဒဟိုသွားလာ နေကြ၊သို့ 
သော်နောက်ပိုင်းထို သူတို့ ကတစ်ခုစီစဉ်လာကြတာရှိသည်၊ဒါက အခြားမဟုပ်၊
ဘဂ်ါလာဒေ့ခ်ျ နှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်စပ်ကလူတွေ တင်ကြိုတင် သဘောတူထား
လျှင်ဦးတည်ရာ နိုင်ငံတွေမှာကြုံသလို အလုပ်လုပ် ကြ မည်၊အဖမ်းခံရလျှင်မြန်
မာပြည်ကဟုပြောကြမည်၊မြန်မာပြည်ဆိုတာက စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြောင့် လူ့ အ
ခွင့်အရေးချိုးဖောက် သည်ဟုကမ္ဘာတွင် နာမည် ဆိုးဖြင့်ကျော် ကြားသောနိုင်ငံ
၊ပြီးတော့ ဗုဒ္ဒဘာသာအများစုနေထိုင်သောနိုင်ငံ၊ ထို့ ကြောင့်အဖမ်းခံရသည့်အ
ချိန်တွင် အစိုးရလူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု၊ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မရှိုထွက်
ပြေးလာရသည်ဟုဆိုလျှင်မိမိတို့ အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ စာနာထောက်ထား
စိတ်နာခြင်းကိုခံရနိုင်သည်၊ မြန်မာ ပြည်က နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားနေသည်
ဆိုတော့အခွင့်အခါကောင်းပင်ဖြစ်သည်၊ ဆိုတော့မြန်မာပြည် ကမြန်မာစကား
အတော်အတန် ပြောတတ် သော ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တို့ က သတင်းထောက်
တွေနှင့်လိမ်ညာလှည့်ပတ်လိုက်လျှင်ကျန်သည့်ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံသား တို့ က
အသာလေးငြိမ်နေလိုက် ရုံဖြင့်ကံကောင်းလျှင် ယူအင်စောင့်ရှောက်မှုကိုခံရနိုင်
ပြီး ထို့ ထက်ကံကောင်းလျှင်အခြား တတိယနိုင်ငံသို့ ပင်ရောက်သွားနိုင်သည်။
ဒါကသူတို့အဓိ ကရည်ရွယ်ချက်၊ထိုင်းစစ်တပ် လုပ်ဆောင်ချက်တွေက သူတို့ 
အကြံအစီကိုအဓိက ပံ့ပိုးပေးသလိုဖြစ်သွားသည်၊ နိုင်ငံတကာမှ သတင်း သမား
တွေဆို တာကမြန်မာ့သမိုင်းကိုက၍မ်းကျင်သည့် သမိုင်းပညာရှင်တွေမဟုတ်၊
မြန်မာ့သမိုင်းကိုလေ့လာနေသူတွေမဟုတ်၊ လူတစ်စုပင်လယ်ထဲ မှာဒုက္ခ
ရောက် နေသည်၊ထိုလူစုကိုသတင်းတစ်ယောက်အနေဖြင့်တွေ့မည်မေးမြန်း
မည်၊ပြီးနောက်ထိုသတင်းကိုသက်ဆိုင်ရာ မိခင်သတင်းဌာနကိုပို့ ပေးလိုက်
သည်၊သတင်းဌာနက ပို့ ပေးသောသတင်းကိုလွှင့်ပေးသည်၊သူတို့ ကသမိုင်း
ပညာရှင်တွေ မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူတွေမဟုတ်တော့ မြန် မာပြည်မှာ
(နာမည်အလိမ်)ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးရှိမှန်းမရှိမှန်း သိကြသည်မဟုတ်၊လုပ်ရိုးလုပ်
စဉ် သာမန်သတင်းတစ်ပုဒ်ကို လွှင့်ပေးရုံသာဖြစ်သည်။ သို့ သော် ထိုသတင်း
သော်လည်းထိုလူမျိုးတို့ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးတို့သမိုင်းအစဉ်အလာတွေကို သိပ်
သိကြသည်မဟုတ်၊သမိုင်း ဆိုလျှင် ဗမာသမိုင်းအလွဲယင်ကျန်သောလူမျိုးများ.
သမိုင်းကိုသိသူများ မှာလက်ချိုးရေတွက်ှုရသည်၊ထို့ ကြောင့်ယနေ့ ပြည်ပရှိမြန်
မာ့မီဒီယာသမာ ဆိုသူတွေအများစုတို့ တွေ။နိုင်ငံရေးတက် ကြွသူဆိုသူတွေမှာ
အခြားလူမျိုးများ သမိုင်းကိုမဆိုထားနှင့်မိမိတို့ သမိုင်းကိုပင် မိမိတို့ ဂဃ ဏဏ
သိသူ အင်မတန်ရှားသည်၊ထို့ ကြောင့်လည်းနိုင်ငံခြားသတင်းဌာနအသုံးအနှုန်း
ကနောက်ကလိုက် ပြီး သုံးနေကြသည်မှာရှက်ဖို့ ကောင်းလှပါသည်၊အမှန်မှာ
သူတို့ ဒီလိုမလုပ်သင့်ပေ၊ ဒီနာမည်တစ်ခုကိုတော့ နိုင်ငံတကာ သတင်းသမား
တွေသုံးနေကြ ပြီ၊ မြန်မာပြည်မှာကားရှိရဲ့ လား၊မသိသူကမှားယင်တောင်သိသူ
တွေက ဆက်ပြီးမမှားရအောင်သတိထားရမည်ဖြစ်ပါသည်၊ ထို့ ကြောင့်မြန်မာ့
သမိုင်း ပညာရှင်၊ ရခိုင်သမိုင်း ပညာရှင်တို့ ထံမေးမြန်းစုံစမ်းပြီးပညာရှင်တို့ အ
တည်ပြုချက်ရမှ ထိုနာမည် ကိုသုံးသင့်ပါသည်၊ဒါက မီဒီယာကျင့်ဝတ်ကို လေး
သို့ သော်ယနေ့ မြန်မာ့ လွပ်လပ်သည့်သတင်းမီဒီယာ သမားဆိုသူတွေ က ဒီ
အောင် ရင့်ကျက်ကြသေးသည်မဟုပ်၊သတင်းတပုဒ်ကို ဒေါ်လာ ဘယ်လောက်
ရမည်။ငါ့မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်လေးရှိတုန်း ငါသိပ်သဘောမကျသည့်ဘယ်သူဘယ်ဝါ
ဘယ်လူမျိုးကိုတော့ဆော်လိုက်အုံးမည်၊ စသည်ဖြင့် သ ဘောထားသေးသိမ်
သည့် လူများကိုအများအပြားတွေ့ နေရ သည်၊ထို့ ကြောင့်လည်း ရခိုင်သမိုင်း။
မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ဘယ်တုန်းကမှမရှိခဲ့သော။ နောင် လည်းဘယ်တော့မှရှိလာ
မည် မဟုတ်သော(ရိုဟင်ညာ)သို့ (ရိုဟင်ဂျာ) ဆိုသောအသုံးအနှုံးကိုတွင်တွင်
သုံးပြီးမြန်မာ ပြည်ကလူမျိုး တစ်မျိုးဖြစ်လေဟန်ထုတ်လွင့်ရေးသားနေကြသည်
ဘာသာရေး လူမျိုးရေးအရ မနာလိုမုန်းတီှးုမဟုပ်ပါ၊အမှန်တရားကိုလက်ခံထား
လိုသူတစ်ယောက်အတွက် မမှန်သည့်လုပ်ရပ်။ မမှန်သည့်သတင်းကိုကြားရ
သည့်အခါဖြစ်တတ်သည့်သဘောသဘာဝ ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်၊တစ်ချို့ ကကိုယ့်
နာမည်ကိုကြိုက်သလိုခေါ်ခွင့်မရှိဘူးလားဟုစောဒက တက်ကြ သည်ကို တွေ့ 
ရပါ သည်၊ကြိုက်သလိုပြောင်းပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်၊ ယခုကျနော့ကလောင်နာမည်
မဟော်သဓာဖြစ်ပါသည်၊ နာမည်ရင်းမဟုတ်ပါ၊သို့ သော် ကျနော်သည် ပုဂ္ဂလိ
ဆိုင်သည့် ကိစ္စများကို စဉ်းစားကြသည့် အခါ ကိုယ် ထင်သလို လျှောက်လုပ်၍
ဖို့ လိုလာပါသည်၊ရခိုင် ပြည်တွင်နေထိုင်ကြ သောဘင်္ဂါလီမူဆလင်တို့ ကိစ္စတွင်
ပြည်ပတွင်ရှိနေသော ကျေးဇူးကန်း ဘင်္ဂါလီမူ ဆလင်တစ်ချို့ က စားပေါက်ရှာ
ရန် (အာရပ်ကမ္ဘာ)က အကူအညီကို ရရန်ရခိုင်သမိုင်း။မိမိတို့ သမိုင်းကိုလိမ်ပြီး
ကျေးဇူးတရားကိုသိတတ် သော ဘင်္ဂါလီမူဆလင်အများစုတို့ က ထိုကိစ္စမျိုးကို
ရခိုင်တို့ နှင့်ပဋိပက္ခဖြစ်မည့်ကိစ္စ မျိုး။ကျေးစွတ်သည့်ကိစ္စမျိုးကိုအထူးရှောင်ရှား
လိုပြီးရခိုင်တို့ နှင့်အေးအတူ ပူအမျှနေလိုကြပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်
အကယ်၍အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြဿနာတစုံတရာ တက်ပြီး မိမိတို့ မိခင်
နိုင်ငံဘင်္ဂလာကို ပြန်ပို့ ခံရလျှင် စားစရာမရှိ နေစရာမရှိဖြင့် လောကငရဲ သို့ 
အရှင်လတ်လတ်ရောက် သွားနိုင်သည်၊ သူ တို့ ဤအရာကိုသေမလောက်
သို့ သော်အကယ်၍ လူတစ်ချို့ ကကောင်းပြီ ငါတို့ ရဲ့ မူလနာမည်ဘင်္ဂါလီဆိုတဲ
့နာမည်ကို တော့မသုံးလိုတော့ နာမည်အသစ်တစ်ခုဆိုပါစို့ (ရိုဟင်ဂျာ)အမည်
ကျန်ဘင်္ဂါလီမူဆလင်အားလုံးတို့ သဘောထားကိုပါ ကောက်ခံပြီး တရား ၀င်
ပြောင်းရပါမည်၊ဒါမှ တရားဝင်မည်ဖြစ်ပြီး အများဆန္ဒနှင့်လည်းကိုက်ညီပါမည်၊
လူမျိုးအချင်းချင်းကြားလည်းဘာပြသနာမှပေါ်စရာမရှိပါ၊ အခုကဲ့သို့ ထင်ရာ
လျှောက်ပြော။လျှောက်လုပ်နေကြလျှင် ပြဿနာမှာမကြီးသင့်ဘဲ ကြီးထွားလာ
နောက်ပြည်ပအစိုးရအဖွဲ့ .၀န်ကြီးဆိုသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုသူတွေက
ပါ မဆင်မခြင် ထိုလုပ်ကြံဖန်တီးထားသောလူမျိုးနာမည်ကို တကယ်ရှိလေဟန်
သံယောင်လိုက်ပေးနေကြသည်ကိုကြားရသည့်အခါ ပို၍ပင် သံဝေဂရစရာများ
ကိုတွေ့ ရပါသည်၊ဒါကြောင့်လည်း ဒီလိုဗဟုတအသိအမြင်နည်းကြလို့ လည်း
ပြည်မှာလူမျိုးဘယ်နှစ်မျိုးရှိမှန်း တောင်မသိဘဲ လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်
လာကြသည်ကိုလည်းအမှန်တကယ် အံ့သြမိပါသည်၊တကယ်တော့ နအဖသိပ်
တော်လို့ မဟုပါဘဲ ကိုယ့်လူတွေညံ့လို့ ဆိုတာကို သေ သေချာချာသတိထား
လိုက်မိသည်၊အလှူရှင် အင်ဂျီအိုတွေကမျက်နှာညို ငြိုငြင်မည့်ကိစ္စဆိုလျှင်မျက်
နှာဖြူဆရာကြီးများအလိုကျမည်ဆိုလျှင် လူမျိုး ပျောက်မည်၊ ဘာသာပျောက်
မည်ကို လုံးဝထည့်မစဉ်းစားကြပဲတနပ်စားကြံနေကြသည့် ဒီလူတွေသာမြန်မာ
ပြည်မှာအာဏာပါဝါတွေရသွားကြလျှင် ကျနော်တို့ နောင် လာနောက်သားတွေ
ရဲ့ ဘာသာ၊သာဿနာအရေးကို ကျနော်မတွေးရဲတော့ပါ၊
Posted by သဇင်ရနံ့at 17:44 No comments:
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ရှိ Boarding High school for Orphan and Help-
less Youths, BHSOH အထက်တန်း ကျောင်းတွင် ၂၀၀၉-၁၀ ပညာသင်နှစ်
၌ရခိုင်ကျောင်သားများ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းမှ ရခိုင်ကျောင်းသား ၂၂
ဦးကို ပညာ သင်ကြားခွင့်ရရန် ကျောင်းအပ်နှံ နိုင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။အဆို
ပါ အထက်တန်းကျောင်းမှာ ရခိုင်အမျိုးသား ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီး ဦးခိုင်ဦး
မောင်မှ ဦးစီး တည်ထောင်ထားသော ကျောင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာ တိုင်းရင်းသား
ကျောင်းသား အများအပြား ပညာ သင်ကြား လျက်ရှိသည်၊၊အဆိုပါ ကျောင်း
သား လူငယ်များထဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အရပ်ရပ်မှ ရောက်ရှိလာသော ရခိုင်
ကျောင်းသား ၂၂ ဦး ရှိပြီး ထိုအထဲတွင် ကျောင်းသား ၁၈ ဦးမှာကျောင်းအိပ်
ကျောင်းစား စခန်းသွင်း နေထိုင်လျက်ရှိသည်ဟု ရခိုင်ကျောင်းသားများ၏
ပညာရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းမှ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြသည်။အဆိုပါ ကျောင်း
သားများ အတွက် ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ ထည့်ဝင်ငွေများဖြင့် အဆိုပါ စီမံကိန်းမှ
ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး မည်သူ တဦးတယောက်ထံမှ ငွေကြေး ကောက်ခံခြင်း၊
အကူအညီ တောင်းခံခြင်းလည်း မရှိကြောင်းလည်း အဆိုပါအဖွဲ့ ပြောခွင့်ရသူ
ကပြောသည်။သို့သော်လည်းယခုအခါမဲဆောက်မြို့တွင်အဆိုပါ အဖွဲ့ အမည်
ကို အသုံးပြုပြီး ငွေကြေးကောက်ခံမူများ ကူညီတောင်းခံမူများ ရှိနေသည်ဟု
သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသဖြင့် အဆိုပါ ကိစ္စမှာ သူတို့နှင့် သက်ဆိုင်မူ မရှိ
ကြောင်း အဆိုပါ အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြသည်။ရခိုင်ကျောင်းသား
များ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းမှာ ရခိုင်ပြည်အတွင်းတွင် ကျွန်ပညာရေး စ
နစ်ဖြင့် ဘ၀ အမှောင်ချခံနေရသည်. ရခိုင်လူငယ်များ အခြေခံပြီး အမျိုးသား
ပညာရေး စွမ်းရည် တိုးမြင့်ရေးကို ရွယ်ရည်ပြီး ဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်း
တစ်ခုဖြစ်သည်။အဆိုပါ စီမံကိန်းကို ပြည်ပရောက်ရခိုင်လူငယ်များက မိမိအ
ရွက်နေသော စီမံကိန်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
Posted by သဇင်ရနံ့at 10:01 No comments:
လူတို့ သည်သမိုင်းကိုရေးနေကြသည်။ သမိုင်းကတခါလူကိုပြန်ရေး၏။သမိုင်း
ဆိုသည်မှာကာယကံရှင်တို့ ကိုယ်တိုင်ရေးချင်တိုင်းရေးလို့ မရ။မိမိတို့ ဘ၀တစ်
လျှောက်ဆိုးကောင်းကျိုးကြောင်းလုပ်ခဲ့သမျှတို့ ကိုသမိုင်းကသူ့ ဖာသာသူ မှတ်
ယနေ့ ကျနော်တို့ အားလုံးတို့ သည်သမိုင်းထဲမှစာမျက်နှာများဖြစ်ကြ၏။၂၀၀၉
၅၀ ကြာသောအခါ မျိုးဆက်သစ်တို့ ဖတ်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်၏။ထိုအခါမောင်ဖြူ
တွင်ပါမည်လား၊သို့ မဟုတ်နှောင်းလူတို့ကျော်ပြီးဖတ်သောသိပ်စတ်ဝင်စားစ
ငသန်ဒေကဲ့သို့စာမျက်နှာထဲတွင်ပါမည်လားဆိုသည်ကို ယနေ့ ကျနော်တို
လောကတွင် အဖြစ်အပျက်တို့ အလွန်လျှင်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်နေကြသည်။ဖြစ်ပေါ်
နေကြမှုတို့ က အကောင်းဘက်ကိုဦးတည်လျှင်တော့သိပ်ပြသနာမရှိ။
အခုအနေအထားက အကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ဖို့ တော့သိပ်မမြင်။
ဆင်းးပြီးတစစီ တစ်လုံးစီပြန့် ကြဲနေကြသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသော ရခိုင့်နိုင်ငံရေးအ
မှာ သွေးညှီပင်နံသည်။ ရန်သူက ဘာမှ လုပ်စရာမလို၊မိမိတို့ အချင်းချင်းတိုက်
သည်၊ပြီး မိမိတို့ အချင်းချင်းသတ်ကြသည်၊မိမိတို့ အချင်းချင်းအပုတ်ချပြီးတစ်ဦး
နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိမိုက်မဲကြသနည်းဆိုသော်ရှေးဘိုးဘေးဘီဘင်တို့့ တည်ထောင်ကိုးကွယ်လာကြသောဘာသာ၊သာသနာကိုလူမျိုးခြားဘာသာခြား
တို့ သတ္တိပြောင်ကြသည်။ တချို့ တော့တစ်မျိုး။သူတို့ ကဒီလိုအကြောင်းပြကြ
စိုးသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်ကိုဘင်္ဂါလီကုလားတို့ လုပ်ချင်သလို
လုပ်ပြသနာမရှိ။ စစ်အစိုးရကိုတိုက်ဖို့ ကအဓိက ဟုပြောချင်သည့်သဘော။
မြန်မာပြည်အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ ကျန်တိုင်းရင်းပြည်သူတွေနှင့်တန်း တူလုပ်နေ
သည်။ သူတို့ နှင့်အတူသူများခြံကိုဝိုင်းမကာပဲကိုယ့်ခြံကိုနွားဆွဲစားနေသည့်ကို
ကာဖို့ လုပ်နေကြသူများကိုလည်းတခါပြောင်းပြန်မြင်ပြီးသူတို့ နှင့်အတူယောက္ခ
ခဲ့ကြလို့ လည်း၁၉၄၈ခုလွတ်လပ်ရေးရတော့ရှမ်းတို့ ၊ချင်းတို့ ကပင်လုံစာချုပ်မှာ
လက်မှတ်ထိုးခွင့်ရလိုက်သည်။ကိုရခိုင်သားတို့ ဘာမှတောင်မရလိုက်။ဟော ခု
တစ်ကြိမ်သမိုင်းတပတ်လည်ပြန်တော့လဲ ဥာဏ်ကြီးရှင်တို့ သူများခြံကိုကာဖို့ အ
ရှင်တို့ ကအမြော်အမြင်ကြီးများစွာဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးတို့ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်
ဆောင်နိုင်သော၊ကိုယ့်ခြံကိုယ့်ပစ္စည်းကို ကိုယ့်ရခိုင်သားတို့ ကာကွယ်ဖို့ ရည်
ရွယ်ပြီးအများပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်သော အဖွဲ့ တစ်ခုကိုသူတို့ တည်ထောင်လိုက်
ယနေ့ ကျနော်တို့ အားလုံးသိနေကြသော နိုင်ငံတကာရခိုင်အမျိုးသားအသင်း
ဤအသင်းကြီးသည်ခေတ်အခြေအနေအချိန်အခါအရ ရခိုင်ပြည်သူတို့ အတွက်
လိုအပ်ချက်အရပေါ်ထွက်လာသောအဖွဲ့့ကြီးဖြစ်ပါသည်။ဤအဖွဲ့ ကြီးကိုကျနော်
တို့ အားလုံးဝိုင်းရံကြဖို့ လိုပါသည်။ ၀ိုင်းဝန်းပြုစုပျိုးထောင်ကြဖို့ လိုပါသည်။ကျ
နော်တို့ နောင်လာနောက်သားမျိုးဆက်များ အတွက်အားထားမှီခိုရာအရိပ်
ကောင်းသော ဗောဓိညောင်ပင်ကြီးဖြစ်အောင်ကျနော်တို့ အားလုံးမြက်နှုတ်
တောင်အဆိပ်ရေတော့မလောင်းမိကြဖို့ လိုပါသည်။ တစစီပြိုကွဲနေသောလူမျိုး
တစ်မျိုးကိုပြန်လည်စုစည်းပြုပြင်ယူဖို့ အချိန်အများကြီးလိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ မ
သူစသည်ဖြင့်စွပ်စွဲနေကြပြန်သည်။၀ါရင့်နိုင်ငံရေးအတွေ့ အကြုံရှိသူ ဆိုသူတွေ
ကလည်း သူတို့ ခိုင်းတာမလုပ်ယင်ပဲနိုင်ငံရေးကိုနားမလည်သူစသည်ဖြင့်စွတ်စွဲ
တခါမှစိတ်ကူးပင်ပေါ်ကြပုံမကျ။ သို့ သော်အသင်းကြီးကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်ပုတ်
ခတ်ဖို့ ဆိုလျှင်တော့သူတို့ ကထိပ်ဆုံးကဖြစ်သည်။
အခုသူတို့ အနေအထားကကောင်းရာ ကောင်းကြောင်းတတ်နိုင်သလောက်အ
စား၊အမျိုးမျိုးဝိုင်းပြီးအမဲဖျက်နေကြသည် ကိုတွေ့ ရတော့အသင်းကြီးကိုမပျက်
ပျက်အောင်ဖျက်နေကြသလားဟုပင် ကျနော်သူတို့ ကိုသံသယ၀င်မိပါသည်။
သင့်ကြပါ။ကျနော်တို့ လိုရာ ခရီးတွေကိုရောက်ဖို့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကို
အသုံးချတတ်ဖို့ သာလိုပါသည်။ ကိုယ်သွားသောလမ်းကိုမလျှောက်ပဲလမ်းခရီး
မှာတွေ့ တဲ့လူနှင့်သူများလမ်းကြောင်းကို လိုက်သွားနေကြရင်တော့ သူများတွေ
ကလိုရာခရီးရောက်လို့ ပျော်နေကြချိန်မှာ ကျနော်တို့ တွေလမ်းစပြန်ရှာလို့ မရ
ဘာကြောင့်ကျနော်တို့ လိုလားသောပန်းတိုင်ကိုမရောက်သလဲဆိုသော မေးခွန်း
လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးပါဝင်နိုင်သော အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုကိုခိုင်ခိုင်မာမာ
တချို့ ကလူမှုရေးအဖွဲ့ မို့ လို့ တို့ နင့်မဆိုင်ဟုဆိုကြပြန်သည်။ လူမှုရေးမှာမပါ
တာတစ်ခုက ရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက် ဘယ်ရခိုင်တစ်ယောက်ဘာကိုလုပ်လိုက်
နိုင်ပြီလဲဆိုတာကိုပဲကျနော်တို့ တန်ဖိုးထားသင့်သည်ဟုမြင်ပါသည်။ အရေးကြီး
မလုပ်လျှင်ဘယ်သူလုပ်မည်နည်း။ယနေ့ အခြေအနေကိုပဲကြည့်ပါ။ တကယ်လို့ 
ယူရေး အစီအစဉ်ကိုဖေါ်ထုတ်နိုင်မည်နည်း။ ကျနော်တို့ ဝိုင်းပြီးခြံကာပေးနေသူ
များက ကျနော်တို့ ဘက်က မကူညီသည့်အပြင်ထိုစစ်တကောင်းသားတို့ ကိုပင်
ကြလို့ သာ ကုလားများထင်သလောက်ခရီးမရောက်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကျနော်
လိမ်နေသည်ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလူသိရှင်ကြားမကန့် ကွက်ဝံ့ကြပါ။အ
ကြောင်းမှာသူတို့ ကိုသူများအမြင်ကျဉ်းသည်ဟုထင်မှာစိုးလို့ ၊အင်ဂျီအိုထောက်
သွားလုပ်မည်နည်း။ ထိုသို့ ဆိုလိုက်သဖြင့်ကျနော့အားလူမျိုးရေးအမြင်ကျဉ်းသူ
အစ္စရေးလူမျိူးတို့ လူမျိုးရေးအမြင်ကျဉ်းလွန်းသဖြင့်သာသူတို့ ကမ္ဘာ့အလယ်
တွင်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဖြင့်ယနေ့ ဝင့်ထယ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ 
သာလူမျိုးရေးအမြင် ကျယ်ကြလျှင်ယနေ့ ဂျူးလူမျိုးတို့့ကိုသမိုင်းတွင်ပြန်ရှာနေ
ကြလောက်ပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ လူမျိုးရေးအမြင်ကျဉ်းခဲ့လို့ သာယနေ့ 
လျှင်ရခိုင်လူမျိုးတို့ လွပ်လပ်ရေးတာကြာလှပြီ။ဆိုတော့ကျနော်တို့ လူမျိုးရေးအ
မြင်ကျဉ်းကြဖို့ အများကြီးလိုအပ်ပါသည်။ ဆိုတော့ကျနော်တို့ ရခိုင်လူမျိုးခေါင်း
ဆောင်ကြီးများကိုလူမျိုးရေး အမြင်သိပ်မကျယ်ကြဖို့ မေတ္တာခံလိုပါသည်။သူတို့ 
သင်းကြီးကိုလူမှုရေးအဖွဲ့ ကနေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အသွင်ကိုသူတို့ အလိုကျပြောင်း
လိုက်ပြီဆိုပါစို့ ။ယခုရှိနေကြသောပါတီအဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးကသူတို့ ပါတီအ
အဖွဲ့ အစည်းချင်းမတူယင်လဲပြသနာမရှိ။မိမိတို့ အချင်းချင်းတူသည်ကိုတွဲလုပ်၊
အလုပ်လုပ်ကြလျှင်ကျနော်တို့ တွေတနေ့ အောက်ကျနောက်ကျလူမျိုးအဖြစ်က
ထိုသို့ မဟုတ်ပဲ ကိုယ်နှင့်စိတ်သဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်သူကိုရန်သူဟုစွပ်စွဲ၊တ
သည်ကိုလည်းမနာလိုမရှုစိမ့်ဖြစ်နေကြလျှင်တော့ ကျနော်တို့ လိုလားသည့်ပန်း
တွက်ဥာဏ်စွမ်း ဥာဏ်စ ရှိသလောက်စိတ်ရင်းစေတနာမှန်ကန်စွာဖြင့်လုပ်ကိုင်
နေကြသောအဖွဲ့ ဝင်များကိုမကူညီချင်နေပါ၊ မနှောင့်ယှက်ပါနှင့်ဟုသာအဖွဲ့ ကြီး
အချုပ်အားဖြင့်ပြောရလျှင် ယနေ့ ဒဘလျူအေအိုအဖွဲ့ ကြီးသည်သမိုင်းလိုအပ်
လာသော အမျိုးသားအင်အားစုအဖွဲ့ ကြီးတစ်ဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။အသင်းကြီးကိုဝိုင်း
ကျနော်တို့ အတူကြိုးစားကြရပါမည်။သို့ မှသာနောင်လာနောင်သားတို့ အား
ထားရာအရိပ်ခိုရာ အေးချမ်းသည့်ဘူမိနက်သန်မြေတစ်ခုကိုကျနော်တို့ ထားခဲ့
နိုင်ပါမည်။မဟုတ်လျှင်တော့ နေပူကျဲကျဲ ကန္တာရထဲမှာ ကျနော်တို့ တေရဲ့ မျိုး
Posted by သဇင်ရနံ့at 17:20 No comments:
အမေရိကန်တွင် ကျင်းပသော ၁၅ ကြိမ်မြှောက် ရခိုင်သင်္ကြန်ပွဲတော် အောင်မြင်စွာပြီးစီး
ဇူလှိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့ကအမေရိကန်ရောက် ရခိုင်အမျိုးသားများ ကြီးမှူးကျင်း
ပသည့်၁၅ ကြိမ်မြှောက်ရခိုင်ရိုးရာသင်္ကြန်ပွဲတော်မှာ အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီး
စီးခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။အဆိုပါ သင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် သက်ကြီး
ပူဇော်ပွဲ၊ စာစီ စာကုံးပြိုင်ပွဲ၊ သင်္ကြန်အဆိုအက၊ ရခိုင်ရိုးရာ ရေလောင်းကစား
ခြင်းနှင့် ထုတ်စည်းထိုး ကစားခြင်း စသည့် အစီအစဉ်များကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့
ကြသည်။သင်္ကြန်ပွဲတော်အတွင်းရခိုင်လူငယ် မောင်မယ်များက အပျို လူပျို
ယိမ်း၊ ရိုးမရံစီ အကနှင့် ဗုဒ္ဓပူဇေနိယ အကများဖြင့် တက်ရောက်လာသူများ
လေးမြို့နှင့် မြောက်ဦးခေတ် ရခိုင် အမျိုးသမီးများ၏ ၀တ်စား ဆင်ယင်မူကို
လည်း ပြသခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ရခိုင်ရိုးရာသင်္ကြန်ပွဲတော်သို့ လူပေါင်း
၁၀၀၀ ကျော်တက်ရောက် ပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ရခိုင်ရိုရာသင်္ကြန်
ပွဲတော်အား နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့တွင်ဇူလှိုင်လ
ပတ်ဝန်းကျင် အချိန်ကာလ အတွင်း ကျင်းပကြသည်။နှစ်သစ်ကူးသည့် ရခိုင်
သင်္ကြန်ကာလကျင်းပသည့် ဧပြီလ အတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အထူးချမ်း
အေးသဖြင့် ပူနွေးသည့် ဇူလှိုင်လတွင် အစားထိုး ကျင်းပကြခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by သဇင်ရနံ့at 11:46 No comments:
Michael Owen marked his first appearance for Manchester United with an 84th-minute winner ina3-2 victory overaMalaysia XI in Kuala Lumpur.
Owen, who came on asasecond-half substitute, reacted smartly to slot homealoose ball after Zoran Tosic had been upended in the penalty area.
A predatory Wayne Rooney strike opened the scoring before Nani's composed finish doubled United's advantage.
A Mohammed Amri Yahyah brace then gave the hosts hope before Owen pounced.
Owen, who also scored on his Liverpool debut asa17-year-old, sentamiscued volley bobbling harmlessly across the face of the goal before finding the net in trademark fashion.
The 29-year-old said: "It's just nice to play with players who are on your wavelength, spotting your runs - they are just class players.
"It's nice to playagame in the red shirt. Just to get off the mark for the season is nice and it's probably doubly good for me as it's my first game as well."
United manager Sir Alex Ferguson was delighted with Owen's contribution.
InaUnited side shorn of summer departures Cristiano Ronaldo and Carlos Tevez, Rooney was the man of the match, scoring the opener, setting up the second and going close several times.
Almost 100,000 fans packed the Bukit Jalil Stadium to watch the famous visitors.
United were set to travel to Indonesia for the second match of their Far East tour but have cancelled the trip following Friday's bomb attacks in Jakarta.
Instead, United will havearematch against the Malaysia XI team on Monday.
The Football Federation of Australia had offered to arrangeagame on Monday but United declined the invitation.
The extra travel would have meantanine-hour flight to Sydney and then an 11-hour trip to Seoul, where United are set to play on Friday.
United will head back to Europe straight afteragame in China next Sunday.
JAKARTA, Indonesia (CNN) -Indonesian police have recoveredalaptop that
they believe belonged to one of the bombers of Friday's twin hotel attacks
in Jakarta, the country's official news agency said Sunday.
Police investigate the aftermath ofabomb blast atarestaurant in the Marr-
iot hotel in Jakarta.
The laptop contained information and codes that the attackers may have us
ed to communicate with each other, the state-run Antara News Agency said.
The computer was found inaroom at the Ritz Carlton, one of two hotels ta-
rgeted Friday. The other site was the JW Marriott.
The blasts killed nine people --including at least two presumed suicide bom-
bers -- and wounded more than 50.
Anti-terrorism officials are investigating the links between the attacks and
Noordin M. Top, the suspected leader ofasmall Jemaah Islamiyah splinter
group. The group has ties to Osama bin Laden's al Qaeda terrorist network,
but so far there has been no claim of responsibility for the latest attack.
Top is reportedly an officer, recruiter, bomb-maker, and trainer for the grou-
p, which was involved inaprevious attack on the Marriott -- in August 2003
as well as attacks onaBali nightclub in 2003 and the Australian embassy in
Jakarta in 2004, according to the FBI.
Among the victims who have been identified by Indonesia's health ministry,
two were Australian, and one each from New Zealand,Singapore and Indon-
Among the wounded were six U.S.nationals,according to the State Departm-
ent.On Sunday, Australian Prime Minister Kevin Rudd confirmed one of the
victims, saying Garth McEvoy was the first government official to be killed
byaterrorist attack in the line of duty.Rudd also said two other Australians
were presumed dead.
Indonesia's National Police Chief Gen.Bambang Hendarso has said the type
of explosives found were similar to those found inarecent raid onahome
in West Java that was linked to Top.
"We cannot clearly determine at this time if these bombings are linked to
Noordin Top's network.We have only established similarities in the explosiv-
e cache that were found in the island of Java and the Bali bombings," police
Closed-circuit television footage from the Marriott showsaman, sporting a
baseball cap and pullingawheeled suitcase, heading toward the hotel's lob-
by-level restaurant seconds before the deadly blast.
Didik Ahmad Taufik, the Marriott's security supervisor, told reporters Saturd
ay thataman, matching the image on the security camera footage,was wa-
lking "awkwardly" into the hotel's restaurant about 30 minutes before the blast.
Emergency numbersMarriott/Ritz-Carlton Family Assistance Hotline +18662-
Taufik said he askedasecurity guard to accompany the man as he made
"But unluckily,afew minutes after that,I heard an explosion and was hit by
debris from the ceiling," Taufik said, according to Antara.
One of the suspected bombers
Posted by သဇင်ရနံ့at 11:37 No comments:
မဲဆောက်မြို့ရှိ BHSOH ကျောင်းတွင် ရခိုင်လူငယ် ၂၂ ဥ...
အမေရိကန်တွင် ကျင်းပသော ၁၅ ကြိမ်မြှောက် ရခိုင်သင်္ကြန...